Qalabka Sawirka. Gawaarida Gawaarida & Disk. Disk Nuqul Software.
DataNumen Disk Image waa aalad awood leh oo isku duuban oo soo celinaysa saxannada ama darawalada. Waxay abuuri kartaa oo soo celin kartaa muuqaalka diskiga ama ku wadi kartaa byte byte. Faa'iido u leh keydinta xogta & soo kabashada, disk / drive copy & cloning, iyo foreensiga.
Download bilaash ah100% aamin ah
iibso HaddaDammaanad qaadashada Qancinta 100%
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,626 cod)
Sida Loo Soo Noqdo
maxaad DataNumen Disk Image?
# 1 Soo kabashada
20+ sano oo
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada! Aad ayaan ula dhacsanahay sida ay tani u shaqeysay.
Muuqaalka Disk ayaa ka fiicnaaday seddex barnaamij oo kale oo xirfadlayaal ah oo ku guuldareystay inuu abuuro sawir nidaam ISO ah - kani si fiican ayuu u shaqeeyay Inkastoo aysan noqon karin
... Akhri wax dheeraad ah
Muuqaalka Disk ayaa ka fiicnaaday seddex barnaamij oo kale oo xirfadleyaal ah oo ku guuldareystay inuu abuuro sawir nidaam ISO ah - kani si fiican ayuu u shaqeeyay. In kasta oo aan laga soo saari karin USB-ga oo ay tahay in laga ordo OS-ga socda, way dhakhso badneyd, 1TB in ka badan 2 saacadood ayaa la isku duubay, waxayna dib u soo celisay si bilaa cillad ah. Awoodda waxqabadkeeda, caato, iyo waliba taageerada fiican ee ay bixiyeen, waxaan kula talin lahaa barnaamijkooda qofkasta oo baahan.
Wayne Rice wuu fariistay
Aad u fudud Isdhexgalka
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Disk Image v2.2
Taageer dhammaan noocyada diskiga iyo wadayaasha.
Taageerada Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 iyo Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Taageero si loo soo celiyo xogta sawirka dib loogu celiyo darawallada.
Taageerida xogta keli ah ee warbaahinta kharribmay.
Taageero si loogu beddelo qaybaha burburay xog cayiman.
Taageero si loo soo dhejiyo kumbuyuutarro badan iyo gawaarida dufcadda ah
Ku habboon in loo isticmaalo aaladda kumbuyuutarka baaritaanka iyo helitaanka elektarooniga ah (ama e-daahfurka, eDiscovery) qalab.
Isticmaalka DataNumen Disk Image si aad ugu sameysid Sawirro Dirawallo iyo Disk
Eeg Casharrada Fiidiyowga Qeyb buuxa
Eeg Casharrada Fiidiyowga (Nooca Demo)
Iyadoo DataNumen Disk Image, waxaad u abuuri kartaa sawirro darawallo iyo cajalado, ujeeddooyin kala duwan, sida keydinta, soo celinta, dambi baarista iyo soo kabashada xogta
Fiiro gaar ah: Ka hor intaadan abuurin sawirro wadis ama disk leh DataNumen Disk Image, fadlan xir codsi kasta oo kale.
Xulo darawalka ama diskiga sawirkiisa la abuurayo:
Haddii aad ku rakibtay USB drive, laakiin kama arki kartid liistada wadista ama diskiga. Waad riixi kartaa
badhan oo isku day mar labaad.
Marka xigta, deji magaca faylka muuqaalka wax soo saarka:
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka sawirka si toos ah ama guji kan
badhanka si aad u caleenta u xulato feylka sawirka.
batoonka, iyo DataNumen Disk Image doonaa start cloning xogta ku jirta drive cayiman ama disk, ka dibna ku keydi faylka muuqaalka wax soo saarka. Bar horumarka
waxay muujin doontaa horumarka kabaha.
Kadib geedi socodka dhirta, haddii feylka sawirka si guul leh loo abuuray, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad u isticmaali kartaa sawirka disk ujeeddooyin kala duwan, oo ay ku jiraan:
U isticmaal sidii keyd ahaan asalka ama diskiga asalka ah.
Ku soo celi sawirka sawirka hore asalka ama diskiga, ama waddo kale ama disk kale.
Ka soo kabso xogta sawirka.
Ku samee falanqaynta xogta baaritaanka sawirka.
DataNumen Disk Image 2.2 waxaa la sii daayay Diseembar 24, 2020
Toos u hubi cusboonaysiinta alaabta.
Otomaatiga u cusbooneysii nooca ugu dambeeyay.
Hagaaji cayayaanka yar yar.
DataNumen Disk Image 2.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 9th, 2020
DataNumen Disk Image 1.9 waxaa la sii daayay Juun 14th, 2020
DataNumen Disk Image 1.8 waxaa la sii daayay Febraayo 1st, 2019
Hagaajinta shaqada soo celinta diskka.
Samayso dhiqlaha qaarkood.
DataNumen Disk Image 1.6 waxaa la sii daayay Diseembar 12th, 2016
DataNumen Disk Image 1.5 waxaa la sii daayay Janaayo 18th, 2015
Taageer si loo soo celiyo sawirada dib loogu celiyo darawallada.
DataNumen Disk Image 1.1 waxaa la sii daayay Oktoobar 21, 2014
Hagaajinta xawaaraha kabaha.
Ku dar macluumaadka tirakoobka ee habka dhejinta.
DataNumen Disk Image 1.0 waxaa la sii daayay 9 Sebtember 2014
Taageer Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 iyo Server 2003/2008/2012.
DataNumen Backup waa aaladda ugu fiican ee la kaydin karo lana soo celin karo xogtaada iyo faylashaada muhiimka ah.
DataNumen SQL Recovery 6.0 waxaa la sii daayay 22 Juunyo 2021